UJENNY PACKHAM KUNYE NOLK UKUQOKELELWA KWEBENNETT BRIDAL SHOE COLLECTION: EKHETHEKILEYO - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UJenny Packham usixelela yonke into malunga nokuQokelelwa koMtshato ka-LK. UBennett
UJenny Packham usixelela yonke into malunga nokuQokelelwa koMtshato ka-LK. UBennett
(Ifoto ngoncedo lukaJenny Packham noLK Bennett)
Ngu: Esther Lee 02/07/2018 ngo-1: 01 AM
KuJenny Packham, osebenzisana noLK UBennett wengqokelela yomtshato yayilolona tshintsho lusengqiqweni nolusengqiqweni kwishishini lakhe. IiDuchess zaseCambridge uKate Middleton kudala ezijonga zombini iimveliso zase-Bhritane njengokubiza kwakhe amagama kwifashoni, amaxesha amaninzi ephuma kwindawo ayithandayo, ehamba ze uLK Iimpompo zeBennett zokubonakala esidlangalaleni, nakwiziqwenga zikaPackham zokuphuma ngokusesikweni.
Iziphumo zeKate, eneneni, zichaphazele isityalo esitsha sabasetyhini abancinci abakhazimlisiweyo, abanesibindi nabakhazimlayo, abajongwa ngqo njengeyona njongo yale ntsebenziswano. Inkqubo ye-LK. UBennett noJenny Packham umtshakazi uqinisekile, ungumfazi kwaye uhamba phambili, uPackham uxelele i-Knot kudliwanondlebe olukhethekileyo. Ungumntu othandanayo wanamhlanje osaziyo isimbo sakhe… uhlala efuna ubugcisa obuhle ingakumbi xa kufikwa kwinkangeleko yomtshato; ingubo yakhe- kwaye kulo nyaka, izihlangu zakhe zomtshato.
Ingqokelela ngokwayo iphefumlelwe ziimpawu zeOld Hollywood ezinje ngoBette Davis kunye noVivian Leigh, kwaye ineempawu ezili-16 ezahlukeneyo zezihlangu, kunye neentsuku ezintlanu zomtshato ezizodwa, ezixabisa ukusuka kwi-265 ukuya kwi-745 yeedola. Funda Ingcaciso Udliwanondlebe olupheleleyo noPackham apha ngezantsi.
Sixelele ukuba le ntsebenziswano yenziwa njani.
Ndihlala ndifuna ukuyila izihlangu zomtshato kwaye ndaziva ukuba uLK UBennett wayengoyena mntu ubenelungelo lokusebenzisana naye. Kukho ulungelelwaniso olomeleleyo phakathi kwe-LK. Umfazi kaBennett kunye noJenny Packham umakoti ke oko kwabonakala kuyindalo kwaye kuyonwabisa kakhulu ukusebenza neqela labo loyilo.
Ndinebhongo ngendlela emangalisayo ngento esiyivelisileyo, ingqokelela intle kwaye ibandakanya ubuhle bukaJenny Packham kunye nokuthembeka koyilo kunye nomgangatho weLK Bennett. Isibini endisithandayo yiDhalia, imbadada yophondo lwendlovu eneembadada 'yomqala' wamakristali!
Ingqokelela iphefumlelwe ngabafazi baminyaka yobudala yegolide ye cinema. Chaza ezinye zeenkwenkwezi ezihambelana nezinto ozithandayo- kwaye ngoba?
Iimpawu ezindala zaseHollywood ezinje ngoMarilyn Monroe, uVivien Leigh kunye noBette Davis bayakhuthaza; isimbo sabo sithandana kwaye sisetyhini kunye nobuhle babo obumnandi. Ndiyayithanda imbono yokuhambisa loo moya ngosuku lwakho lomtshato.
Abanye bamagama abaphezulu kakhulu banxibe uyilo lwakho kwikhaphethi ebomvu nakwiminyhadala. Khawusixelele, ngawaphi amaxesha osaziwayo owathandayo- kwaye ngoba?
Ihlala ingumzuzu omnandi kum xa umntu enxibe enye yoyilo lwethu. Ndihlala ndiyila kunye nesihlandlo engqondweni ukuze ndikunandiphe ngakumbi ukwenza iziqwenga ze-bespoke; soloko ingumceli mngeni onomdla kum ngobuchule. Kutshanje siyile ezinye iindlela zokujonga umboniso we-Dita Von Teese we-burlesque.
Into endiyithandayo yingubo yesilika ye-chiffon antique emhlophe egqunywe nge-crystal Swarovski ngesandla esineentsiba.
Ngokwe-styling kusuku lwakho lomtshato, zeziphi ezinye iingcebiso onazo kubafazi?
Thatha ixesha lakho, uyonwabele kwaye ufumane uluvo lwesibini kumntu omthembileyo. Izixhobo zesitetimenti zongeza ubukhazikhazi kwangoko, ndiyayithanda imbono yokunxiba isihlangu esinomdla ngokwenene ngosuku lwakho lomtshato njengeFifi. Ndiqinisekile ukuba izixhobo ezikholelwayo kufuneka zincome inkangeleko yakho kunokuba zikhuphisane nayo. Ukuba unxibe isinxibo sengubo, ndingacebisa isihlangu esilula njengesithende seBrielle Satin.
imilo enxibe ilokhwe ephantsi
Umtshato ka-priyanka kunye no-nick jonas
Bahlawula malini abacwangcisi bemisitho
ukuthumela nini ukugcina imihla
iingoma zokungena kwiqela lomtshato ngo-2017
Ndifuna ukwabelana ngalo lonke uthando lwam nawe